Rheumatic fanafody - Shijiazhuang Yiling Hospital
Firosoana ny maromaro mahomby TCM fiomanana:
1) Xianling Huoluo Powder: Tsy manafana ny nisinda ny hatsiaka toy ny havandra vaventy, ary manaisotra detoxifies stasis. Izany no ampiasaina amin'ny scleroderma voan'ny hatsiaka coagulation aman-dra stasis, maneho mafy, matevina sy edematous hoditra amin'ny gloss ny savoka, hozatra atrophy, voafetra maotera ny asa, paucity ny endrika, fahaverezan'ny ny fahafahana akaiky maso, acrocyanosis, arthralgia sy squamous ary maina ny hoditra, sns
2) Dangui Huoluo Powder: Izany mampisava ny hafanana sy ny poizina fitaovana. Izany no ampiasaina amin'ny henjana, matevina, nivonto sy mafy hoditra vokatry ny scleroderma amin'ny misy poizina hafanana sy ny ra stasis fanoherana, raha nanery dia an-toerana manafana ny, mamirapiratra toy ny savoka, amin'ny voafetra maotera ny asa, sarotra amin'ny fanokafana-bava, ary aza dysphagia, sns .
3) Shenmai Kaifei Powder: izany dia manampy Qi sy mamelona Yin, detoxifies sy mampiroborobo ra fikorianan'ny ra. Izany no ampiasaina amin'ny tratrany fahoriana, avy miaina, sy reraka sns mikohaka feon'ny scleroderma nahatonga ny tsy fahampian'ny voan'ny Qi sy Yin, ra misy poizina stasis sy fanangonan-karena.
4) Shenxiang Zhuyun Powder: Izany be herim-ny spleen sy ny fanampin Qi, mifanaraka kibo ho an'ny nidina hiharan'ny Qi. Izany no ampiasaina amin'ny tsinay scleroderma voan'ny fery deficient spleen sy ny malemy hery tena lehibe, vavony Qi fa mahatonga fiakaran'ny rano fisotro, rehefa mikohaka, dysphagia, kibo distension, stomachache, alternating ny aretim-pivalanana sy ny fitohanana, etc.
5) Shenqi Yiqi Capsule: Tsy mahasoa Qi, be herim-ny spleen, dia mampiasa fikorianan'ny ra. Izany no ampiasaina amin'ny scleroderma Qi marary voan'ny tsy fahampiana sy ny ra stasis, maneho fa ny marary any salama, lassitude, fohy ny aina, kibo fahafenoany sy distention, fihenan'ny amin'ny sakafo sy ny hypoimmunity, etc.
6) Shenling Fuyuan Capsule: Izany be herim-ny spleen sy ny voa, sy ny fiakaran'ny maripanan'ny be herim-Qi Yang. Izany no ampiasaina ho an'ny voan'ny scleroderma fahaverezan'ny Zhenyuan sy reraka hafanana izay mahatonga ny tsy fahampian'ny amin'ny Mangatsiaka, Fanina, tinnitus, fanaintainana sy ny fahalemena amin'ny andilany sy ny lohalika malemy, ny fahalemena émission nentin'ny alina.
7) Guishao Tongluo Powder: mamindro Yang izany sy mampirisika ny ra fikorianan'ny ra, manaisotra spasmolysis, ary dredges collaterals. Izany no ampiasaina amin'ny scleroderma amin'ny miandrona coldness amin'ny mitataovovonan sy ny fanaka momba azy ary ny fanehoana dia mangatsiaka rantsambatana, acrocyanosis, miova loko avy fotsy, cyanosis ny mena, rehefa distally tratran'ny coldness, mety mampitombo ny fihetseham-po miova, ary mafy ny marary dia afaka maneho microdactyly, nanakana hiondrika sy mamelatra, fery sy ny fery mandoaka, etc.
8) Shenjing Yangrong Capsule: Izany manamafy ny maha zava-dehibe sy ny fanamafisana orina ny primordial Qi, mamelona sy mampiroborobo ny sela fiterahana indray. Izany no ampiasaina ho an'ny scleroderma ao amin'ny dingana dermatrophia amin'ny asthenia ny Qi sy ny rà, ary ny fanehoana dia subcutaneous sela sy ny hozatra atrophy, hoditra shriveling amin'ny solaitrabe toy ny taolana forming Hentitra loatra.